Global Voices teny Malagasy · 5 Desambra 2012
Tantara tamin'ny 05 Desambra 2012
Azia Atsinanana 05 Desambra 2012
Amerika Latina 05 Desambra 2012
Eoropa Afovoany & Atsinanana 05 Desambra 2012
Hongroà an'arivony no nijoro niray hina hanohitra ny fankahalàna Jiosy tamin'ny hetsika iray natao tao Budapest. Teny koa ireo mpanao politika avy amin'ny antoko eo aminy fitondràna sy ny mpanohitra. Nisokatra indray ny fifanakalozan-dresaky ny olona mikasika ny fiakaran'ny fanohanana azon'ny antoko farany havanana any Hongria - ary, raha hitarina, nampitambatra ny firenena Hongroà io
Antonio Rodiles, kaomisera avy amin'ny seha-pifanakalozan-kevitr'ireo manampahaizana miasa tena Estado de SATS [es], dia nafàhana tao Havana tamin'ny Alarobia teo taoran'ny niaretany famonjana nandritra ny telo herinandro. Ny 7 Novembre i Rodiles no navotsotra, niaraka taminà bilaogera maro hafa sy mpisolovava sivily tao amin'ilay nosy, ahitàna an'i Laritza Diversent, bilaogera fanta-bahoaka sy mpisolovava, mpanoratra ny bilaogy Jurisconsulto de Cuba [es] (Mpanolotsaina Momba ny Lalàna Kiobana). Tsy nisy vaovao mihitsy mikasika ny famotsorana an'i Diversent hatramin'ny 3 Desambra 2012.